Let's talk about IT: Linux မှာ virus မရှိဘူးဆို ?
Linux မှာ virus မရှိဘူးဆို ?
အခုတစ်လော Linux မှာ virus မရှိလို့သုံးတယ်ဆိုတယ့် သူတွေများလာတယ်ဆိုတယ့်အကြောင်း ညီလေးတစ်ယောက်ကလာလာပြောနေတယ်။ Virus ကြောက်စရာမလိုလို့ Ubuntu ပဲသုံးတယ်ဆိုတယ့် သူတွေပေါ့။ Linux ကပျော်စရာ လည်းကောင်းသလို challenging လည်း ပိုများပါတယ်။ သူတို့ဘာသာ ဘာကြောင့်ပဲသုံးသုံးပါ သုံးဖြစ်ဖို့က အဓိကပေါ့။ သုံးဖြစ်သွားရင် သုံးရင်း လေ့လာရင်း သိလာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မသုံးဖြစ်တယ့် သူတွေ၊ လေ့လာမှု အားမကောင်းတယ့် သူတွေအတွက် idea အမှားကြီးဖြစ်ပြီး 'ဪ ကြားပြီးပြီလား၊ Linux ဆိုတာကြီးက virus မရှိဖူးတဲ့' ဆိုပြီး ယောင်တောင်တောင်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်းမသိပဲ သံယောင်လိုက်မယ့်သူတွေ အတွက်တော့ မကောင်းဖူး။
Linux က bullet proof operating system တစ်ခုမဟုတ်ပါဖူး။ Security ကို အဓိက ဦးစားပေးစဉ်းစားထားတယ့် Unix ကို အခြေခံထားတာပဲရှိတယ်။ လူလုပ်တယ့် ကိစ္စ ဘယ်တော့မှ perfect မဖြစ်ဖူး၊ စိတ်ပူမနေနဲ့။ Windows နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Virus နည်းတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ နည်းလွန်းလို့ မရှိသလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဘာကြောင့် နည်းတာလည်း ဆိုရင်တော့ ဒါတွေကြောင့်လို့ ကျနော်က မြင်တယ်။
Home user တွေကြားထဲမှာ Linux အသုံးပြုသူက 2% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီလောက်လေးနဲ့ကြ virus/trojan ရေးတယ့်သူတွေကို မဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ရေးတယ့် virus/trojan ပြန့်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းမယ်။ အလုပ်လည်းသိပ်မဖြစ်ဖူးပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ Linux မှာ virus ရေးဖို့ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြတာဖြစ်မယ်။ နောက်တော့ ရှိလာကြမှာပါ။
၂။ Advanced Users
လွန်ခဲ့တယ့် သုံးနှစ် 2007 လောက်ကထိ Linux ကသုံးရတာမလွယ်ကူပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးချင်သူတွေ၊ Computer အကြောင်း သိပ်မသိချင်ပါဖူး၊ သုံးလို့ရပြီးတာပဲ ဆိုတယ့် သူတွေရဲ့ choice မဖြစ်ခဲ့ပါဖူး။ Linux သုံးတယ့် သူတော်တော်များများက IT နယ်ပယ်ထဲကလူတွေ၊ IT ကို အနည်းနဲ့ အများ စိတ်ဝင်စားတယ့် သူတွေ များပါတယ်။ ဒီ computer ပေါ်မှာ သူတို့ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သေခြာသိတယ့် သူတွေမို့ ၊ security sense ရှိကြပါတယ်။ တွေ့ကရာ လျှောက် click ၊ install ဆိုပြီး လုပ်ကြမယ့် သူတွေမဟုတ်လို့ ဒီလိုလူတွေကို target ထားတာထက်စာရင် ၊ Pop-up တွေ့ရင် ကောက် click လိုက်မယ့် novice တွေကို ပိုပြီး target ထားတာကောင်းမှာပေါ့။ အဲလို novice တွေက သုံးရတာပိုလွယ်ကူတယ့် windows သုံးလေ့ရှိတယ်လေ။ အဲလို user တွေ Linux များများသုံးလာရင် Linux လည်း target ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ၊ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။
၃။ Fix တွေထွက်တာမြန်တယ်
Opensource မို့လို့ lib တွေမှာ exploit တွေ flaw တွေရှိနေရင် ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကတာ inform လုပ်၊ နောက်က fix လုပ်မယ့် သူတွေက အများကြီး။ ဒါကြောင့် Linux ရဲ့ exploit တွေက သိပ်ပြီး ကြိုးစားကြည့်ချင်စရာ မကောင်းဖူး။ ကိုယ်က ဒီနေ့ရှာတွေ့ နောက်နေ့ fix ထွက်နေပြီ။ User တွေ patch install လုပ်တာ မလုပ်တာ တစ်ပိုင်းပေါ့။ MS မှာတော့ Conficker တုန်းက exploit ရှာတွေ့တာနဲ့ fix က နှစ်လလောက်ကြာပါတယ်။ User က update မလုပ်မိတာတွေရှိလို့ ဒီ exploit က တစ်နှစ်လောက် ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒီလိုတွေရှိတော့လည်း လုပ်စားရ ပိုကောင်းတယ့် Windows က virus/trojan ပိုထွက်တာပေါ့။
ဒါ ထင်သာ မြင်သာ အချက်တွေပါ။ ဒါထက်ပိုတာတွေ ရှိအုန်းမှာပါ။ Unix / Linux မှာ အရင်တုန်းက rootkit ဆိုတယ့် အသုံးအနှုန်းက ပိုခေတ်စားပါတယ်။ Trojan လို backdoor လို ကောင်မျိုးပါပဲ။ Backdoor ပိုဆန်မယ်ထင်တယ်။ Kernel module တစ်ခုအဖြစ်၊ device driver တစ်ခုအဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဟန်ဆောင်ပြီး Operation system တက်တိုင်း သူကပါလိုက်တက်လာမယ်၊ service တစ်ခု port တစ်ခု compromise ထားမယ်၊ attacker အတွက် ဝင်လမ်း ထွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် process list ထဲမှာတော့ မပေါ်ဘူး။ ဒါမျိုးက တကယ် intrude လုပ်ပြီးသွားမှ နောက်တစ်ခါ ပြန်ဝင်ရလွယ်အောင် လုပ်တာမျိုးပါ။ Virus / Trojan ဆိုတာမျိုးထက် advance ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတော့ user information ခိုးတယ့် trojan လိုကောင်တွေတောင် linux မှာ ပေါလာပါပြီ။ Ubuntu / debian package ဖြစ်တယ့် deb file တွေမှာ trojan လေးတွေထဲ့ပေးတာတို့၊ tarball မှာကို ပါလာတာတို့ရှိလာပါပြီ။ Opensource မို့လို့ security fix ထွက်တာမြန်သလို ၊ opensource မို့လို့ trojan လေးထဲ့ပေးလိုက်ဖို့လည်း ပိုလွယ်ပါတယ်။ Deb တို့ rpm တို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်ပြောရင် exe installer တွေလိုပါပဲ။ Run လိုက်ရင် ဘာတွေလုပ်မယ်၊ ဘယ်လမ်းကြောင်းအောက်မှာ ဘာထားမယ်၊ ဘယ် service ကို startup မှာတင် run အောင် service register မယ်၊ ဒါမျိုးတွေပါပဲ။ ပုံမှန် install လုပ်မယ့် action လေးအပြင် trojan install လေးပါထဲ့ပေးထားရင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Tarball source file တွေဆိုလည်း ပြန်ပြင်ထားတယ့် source file လေးတွေထဲ့ပေးထား၊ user က compile ပြီး install လည်းလုပ်လိုက်ရော trojan လေးပါဝင်။ ဒါလည်းဖြစ်တာပဲ။ ပုံမှန်ကတော့ ယုံကြည်ရတယ့် site က repository ကမဟုတ်ရင် install မလုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ Security အတွက် instller package က original အတိုင်းဟုတ်မဟုတ် ၊ ပြောင်းလည်းထားတာရှိမရှိ PGP တို့ GPG တို့လို hash matching / keys တွေနဲ့ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ သုံးနေတယ့်သူတွေ သိမှာပါ။ GPG မကိုက်လို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် official GPG မရှိလို့ install လုပ်မှာ သေချာလား ဆိုတယ့် confirmation မျိုးမေးတာ Ubuntu မှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ နည်းနည်း တော့ ဂရုစိုက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်။
AppArmor တို့ SELinux တို့လို့ security layer မျိုးထပ်သုံးရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ် user ၊ ဘယ် process က ၊ ဘယ် folder ကိုပဲ access ရမယ်၊ ဘယ်လို action မျိုးပဲရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေက ပုံမှန် Unix / Linux ရဲ့ native ACL ထက် အများကြီး ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ပိုလို့ Fedora တို့ ဘာတို့မှာဆို တော်တော်များများက disable ပြီး သုံးကြတယ်။ ကျနော်အပါအဝင်ပါ :D ။ သတိဆိုတာတော့ ပိုတယ်မရှိပေါ့ဗျာ။ ( သူများတွေအတွက်ပြောတာပါ )
ခုတစ်လော Unreal IRCD ရဲ့ news ကိုဖတ်မိလို့ ဒီ post ရေးဖြစ်သွားတာ။ Unreal IRCD ဆိုတာ opensource IRC server patform တစ်ခုပါ။ IRCD ထဲမှာတော့ နာမည် အရှိဆုံးပဲထင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ Official download mirror တစ်ချို့က tarball တွေကို တစ်ယောက်ယောက်က trojan ပါတယ့် file တွေနဲ့ အစားထိုးသွားပါတယ်။ Compile / install လုပ်လိုက်ရင် trojan လေးပါ ပါလာမယ်။ ဒါတောင် official mirror တွေ။ သူတို့က GPG နဲ့ပေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ file ရဲ့ integrity check မပါဖူးပေါ့။ ပြင်ထားလည်း User ဘက်ကမသိနိုင်ဖူး။
Linux မှာ virus တွေ trojan တွေရှိတယ်လို့ လှန့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Windows နဲ့ယှဉ်ရင် အတော်ကိုနည်းပါတယ်။ ရှိတာတော့ ရှိတာပါပဲ။ Linux က idiot proof OS တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ 'ငါတို့ကတော့ virus မကြောက်ရလို့ Linux ပဲသုံးတယ်' လို့ ပြုံးပြုံးကြီး မပြောမိအောင် သတိပေးတာပါ။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အမှားကြီးကို မှတ်ထား၊ သူများတွေကိုလည်း အမှားတွေ လျှောက်ပြောနေမိရင် ဆက်လေ့လာတယ့်နေရာမှာ သိထားတယ့် အကြောင်းအရာ အမှားကြီးတွေက ကန့်လန့်ခံနေလို့ ပိုပြီး ခက်ခဲနေမှာ ဆိုးလို့ပါ။ Santa Clause တကယ်ရှိမရှိနဲ့ ၊ Linux မှာ virus / trojan တကယ်ရှိမရှိက သူများပြောတာထက်. . သုံးရင်း ၊ လေ့လာရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
Posted by Divinity at 9:05 PM
Labels: Article, Divinity, Linux
I will treat4cups of coffees for four posts.
It shouldb6, coz there is6posts from me within this June. I just realized i've been doing nothing lately in the office. haha . :D :D
It should be six ...
But all in one time ....
DD Thanks for your post .. :P
Redirection in tomcat
Mutiple SSL sites on single IP
Clean script ( shell scripting)
Linux တစ်ရပ်စာ မျှော်စဉ်ထက်က မြင်ကွင်း (3)
Linux တစ်ရပ်စာ မျှော်စဉ်ထက်က မြင်ကွင်း (2)
Linux တစ်ရပ်စာ မျှော်စဉ်ထက်က မြင်ကွင်း